हाम्रो शिक्षालय: काम नलाग्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना - फ्री प्रेस नेपाल
by कमलप्रकाश मल्ल
६ मंसिर २०७५, बिहीबार ११:५०
६ देखि ८ सेमेस्टरसम्म पढ्यो भने संसारका कुनै पनि भाषामा दक्ष बन्न सकिन्छ । लेख्न, पढ्न, बोल्न र बुझ्नको लागि आठ सेमेस्टरसम्ममा निपुण बनाउन सकिन्छ । तर नेपालमा १५ बर्ष सम्मको लागि नेपाली र अग्रेंजी भाषाहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसमा भएको आर्थिक लगानी र समयको लगानी कति उत्पादक भइरहेकोछ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
शिक्षाको उद्देश्य ब्यक्ति र समाज दुबैलाई माथि लैजाने हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा ब्यक्ति र समाजको विकासका लागि आर्थिक उन्नतिलाई टेवा पुर्याउने खालको शिक्षा हुनुपर्छ । ब्यक्तिको चाहनालाई मात्र होइन, समाजलाई नै अगाडि बढाउने र श्रमशक्ति तथा उत्पादन प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने खालको शिक्षा हुनुपर्छ । त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको हाम्रो शिक्षा बिद्यार्थीहरुको ब्यक्तित्व विकास गर्ने र सामाजिक, साँस्कृतिक चेतना उठाउने मात्रमा सीमित छ भन्दा फरक पर्दैन ।
उच्च माध्यमिक तहदेखि एउटा सीपको विकास गर्ने किसिमको बजारमुखी शिक्षा दिन खोजिरहेको देखिन्छ । तर अहिले मूलतः उच्च शिक्षाको लागि तयारी गर्ने अर्थात एउटा तहबाट माथिल्लो तहको विद्यार्थी तयार गर्ने काम मात्रै भइरहेकोछ । एउटा तह पार गरिसकेपछि विद्यार्थीहरु उत्पादन प्रक्रियामा बजारमा वा आर्थिक उन्नतिको लागि उपयोग भएका छैनन । त्यसैले स्नातक गरिसकेपछि एम.ए. गर्ने र त्यसपछि अर्काे विषयमा एम.ए. गर्ने अथवा त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जाने भइरहेकोछ । एककिसिमले हेर्ने हो भने त्यही शिक्षा प्रणालीभित्रै ‘रिसाइकल’ भइरहेकोछ । शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर गएर उत्पादनशील क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने,श्रम बजारमा वा आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउने काम भइरहेकोछैन ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीअनुसार नेपाली पढियो भने नेपालीको मास्टर बन्ने, अग्रेंजी पढियो भने अग्रेंजीको मास्टर बन्ने वा अर्थशास्त्र पढ्यो भने अर्थशास्त्रको मास्टर बन्नेसम्ममा मात्र सीमित छ । यो त एउटा रुखको वरिपरि घुम्ने काम मात्रै भयो । सामाजिक र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने खालको शिक्षा हैन । धेरैजसो ‘ह्वाइट कलर जव’ गर्ने वा त्यो पाइएन भने ‘ब्राउन कलर जव’ गर्ने किसिमको श्रमशक्ति हामी तयार गर्दै छौं । त्यस्तो शिक्षाले देशलाई गरिबीको कुचक्रबाट पार लगाउन सक्दैन ।
सामान्यतया यो कुरा शिक्षाको अन्तर्वस्तु वा गुदीसँग सम्बन्धित कुरा हो, मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्धित कुरा हो । हाम्रो पाठ्यक्रमका मूल अवधारणाहरु औपनिवेशिक शिक्षा प्रणालीको उत्तराधिकारीका रुपमा जन्म भएका हुन् । हामी भाषा, विज्ञान, गणित वा इतिहास, भूगोल, सामाजिक शिक्षा आदिका किताबी ज्ञान त दिन्छौं, तर हाम्रो देशले सामना गर्नुपरिरहेका समस्याहरु ( जस्तै गरिबी, अविकास, जनसङ्ख्या–बृद्धि,बेरोजगारी,वातावरण–प्रदुषण, लैङ्गिक–असमानता वा दलित, जनजाति समस्याहरु ) का बारेमा हाम्रो शिक्षाले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेकोछैन । नेपालमा गरिबीको कारण के हो ? जनसँख्या बृद्धि किन भइरहेको छ ? यी समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने खालको हाम्रो पाठ्यक्रम नै छैन ।
मध्ययुगमा युरोपमा पढाइने किसिमको परम्परागत पाठ्यक्रमलाई हामीले गुण–दोषसहित अपुतालीमा प्राप्त गरेका थियौं । यस पाठ्यक्रमले मानव ज्ञानलाई खण्डित गर्छ । मानिसलाई टुक्रयाउँछ । त्यसैले यहाँ सम्पूर्ण मानिसको होइन,मानिसको अङ्गप्रत्यङ्गको मात्रै अध्ययन भइरहेको छ । यसबाट ब्यक्तिलाई सिर्जनशील र प्रजातान्त्रिक बनाउने कुरामा कम आशावादी हुन सकिन्छ ।
शिक्षामा अनिवार्य शिक्षा
नेपालमा करिब ४८.६१ प्रतिशत जनसंख्या नेपाली भाषा–भाषी छन् । बाँकीको मातृभाषा नेपाली होइन । करिब ५१.३९ प्रतिशत विद्यार्थीहरुका लागि नेपाली मातृभाषा, घर र आफ्नै समाजमा बोलिने भाषा होइन । त्यसैले उनीहरुलाई अन्य भाषा बुझ्ने, बोल्ने र विचार गर्ने कुरामा समस्या छ । सामान्य कुराको बिषयमा बुझ्नु र बोल्नु एउटा कुरा होला तर गहन विषयहरुमा भाषा प्रयोग गर्ने दक्षता प्राप्त गर्नु अर्कै कुरा हो ।
अहिलेको पाठ्यक्रमको विषयवस्तु सांस्कृतिक हिसाबमा पक्षपातरहित छैन । शेर्पाहरुको एउटा गाउँमा दशै वा तिहारको कुरा उनीहरुको संस्कृतिसँग त्यति मेल खाँदैन जति ल्होसार वा उनीहरुका मणिरिम्दु वा स्याब्रु नाच वा अन्य चाडबाड सान्दर्भिक हुन्छ । उनीहरुको संस्कृतिसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग उठाउँदा उनीहरुको सिकाइलाई सजिलो बनाउँछ । उनीहरुले दिनदिनैको जीवनमा अनुभव गरिरहेका सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरुको उदाहरण दिइयो भने तुरुन्त बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
त्यसैले भाषिक पाठ्यक्रम र सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी पूर्वाग्रहहरु थुप्रै छन् । राज्यको अमूक भाषा, भेषभूषा र संस्कृतिसंग सम्बन्धित बिषयहरुलाई मात्रै ओगट्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएकोछ । त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या हो, पाठ्यपुस्तक र शिक्षणमा प्रयोग हुने भाषा, शिक्षण विधि र स्कूलको भाषा । विद्यार्थी स्कूलमा जानासाथ स्कूलमा बोलिने भाषामा एक्कासि परिवर्तन आउँछ । यसो हुँदा विद्यार्थीहरुलाई एउटा नयाँ संसारमा, एक अनौठो समुदाय र संसारमा आएजस्तो हुन्छ । सुरुमा उनीहरुले ती भाषाहरु बुझ्दै बुझ्दैनन् । नबुझ्दाखेरि सोचाइ विकास गर्न र कुराकानीमा अभिब्यक्ति गर्न गाहे पर्छ ।
गैरनेपाली–भाषाभाषी विद्यार्थीहरुको रिजल्ट हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ–भाषाकै कारणले पनि विद्यार्थीहरु असफल र अपाङ्ग भएका छन् । संस्कृतबाट आएका भाषाहरुमा ( जस्तै नेपाली, अवधि,थारु,बङ्गाली वा हिन्दी ) धेरैजसो शब्दहरु एउटै प्रकारका छन् । हिन्दी, नेपाली, मैथिली वा गुजराती बङ्गाली जेमा पनि ‘मानवता’ भन्नुपर्यो भने उही वा उस्तै शब्दको प्रयोग हुन्छ । त्यसैले इन्डोआर्यन–भाषापरिवारका भाषीहरुलाई बुझ्न त्यति समस्या पर्दैन । तर तामाङ, राई, लिम्बु, चेपाङ, गुरुङ, मगर, थकालीहरुको भाषापरिवार नै अलग छ । यी भाषामा भाववाचक शब्दहरु न्यूनप्रायः छ । त्यसैले गर्दा उनीहरुलाई बोलाइ र लेखाइमा conceptualize गर्न निकै गाह्रो पर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन १९७८ मा एउटा अध्ययन गरेकोथियो । यो अध्ययनमा सन १९७४ मा भर्ना भएका र सन १९७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु कुन जातबाट आएकाछन् ? विज्ञान, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, कृषि र वनविज्ञान जस्ता प्राविधिक संस्थानहरुमा कुन जातका विद्यार्थीहरुले बेसी अवसर पाएका छन् ? यस्तै सामाजिक शास्त्र र ब्यवस्थापन आदि विषयमा कुन जातका विद्यार्थीहरु बढी छन् र दलित, जनजाति तथा महिलाहरुले के –कति अवसर पाएका छन् ? यसको स्पष्ट जवाफ खोज्न सो अध्ययन गराइएको थियो । त्यो अध्ययनबाट विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरु बाहुन, क्षेत्री र नेवार मात्रै भएको देखियो । तर सामान्य शिक्षामा चाहिं बाहुन, क्षेत्री र नेवार करिब ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत चाहिं अन्य जातका विद्यार्थीहरु थिए ।
त्यसले के देखाउँछ भने ज–जसले इन्डोआर्यन अर्थात नेपाली, हिन्दी, मैथिली भाषामा निपुणता प्राप्त गर्नसक्छ, उनीहरुले सजिलै उच्च शिक्षामा अवसर पाएका छन् । नेवारहरुको भाषामा पनि धेरै शब्दहरु इन्डोआर्यन भाषा–परिवारबाट आएका छन् । त्यसैले नेपाली भाषामाथि उनीहरुको केहि हदसम्म दखल भएकोले उच्च शिक्षासम्म उनीहरुको पहुँच राम्रै छ ।
हो, पहुँचलाई धेरै किसिमले हेर्न सकिन्छ । एउटा हो शारिरीक पहुँच । स्कूल/ क्याम्पस कति टाढा छ, केटाकेटीले कति हिंड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । अहिले आएर नेपालमा कुनै पनि प्राथमिक स्कूल आफ्नो घरदैलोबाट आधा घण्टाभन्दा टाढा छैन ।
अर्काे आर्थिक पहुँचको कुरा छ । अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीहरुलाई गतिलो स्कूलमा पढाउन सक्छन् कि सक्दैनन ? सैद्धान्तिक रुपमा माध्यमिक स्तरसम्म शिक्षा अहिले निःशुल्क छ । शुल्क तिर्नु पर्दैन । प्राथमिक तहको लागि किताव पनि किन्नु पर्दैन । तर नेपालमा थुप्रै प्रकारका स्कूलहरु छन्, जबकि श्रीलङ्कामा निजी स्कूल नै छैनन । नेपालमा प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयहरु पनि निजी, सामुदायिक र सरकारी छन् । कुनै स्कूलमा स्विमिङ्ग, हर्स राइडिङ, कम्प्युटर,प्लेग्राउण्ड,ब्याड्मिन्टन कोर्ट छ भने कुनै स्कूलको छाना नै छैन । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र स्कूलको वातावरण पनि यस्तो फरक–फरक स्थितिमा निजी या सरकारी, कसको कस्तो खालको शिक्षण संस्थामा पहुँच छ भन्ने पनि सवाल उठ्छ ।
मनोवैज्ञानिक कुरा त झन आधारभूत कुरा नै भयो । कितावमा विवाह–पन्चमी, राम–जयन्तीको कुरा छ भने हिन्दु–संस्कृतिमा हुर्केका विद्यार्थीहरुले त त्यसलाई राम्रोसंग बुझ्छन् । तर गैर–हिन्दु संस्कृतिमा हुर्केका विद्यार्थीहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुँदैन । कामी, दमाई र सार्कीका छोराछोरीले कक्षाकोठा भन्दा बाहिर बसेर शिक्षकले पढाएको सुन्नुपर्ने, धारोमा सँगै पानी खान नपाउने, छोइयो भने पिटाइ खानुपर्ने हुन्छ । यो मनोवैज्ञानिक पहुँचको कुरा हो । मनोवैज्ञानिक पहँुच पनि हाम्रो शिक्षा–प्रणालीमा एकसमान छैन ।
नेपालमा सार्वजनिक स्कूलहरुमा माध्यमिक तहसम्म ३ ओटा भाषामा पढाइन्छ । कक्षा १ देखि नेपाली, अग्रेंजी र निम्न–माध्यमिक तह (६,७ र ८ कक्षा ) मा ५० नम्वरको संस्कृत अनिवार्य विषयको रुपमा पढाइन्छ । २०४९ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ५० नम्वरको संस्कृतलाई निम्न–माध्यमिक तहमा अनिवार्य बनाइदियो । नेपाली र अग्रेंजी अनिवार्य त्यसै छ । तर नेपालकै अरु जीवित राष्ट्रिय भाषाहरु सबै ऐच्छिक समूहमा छन् । एस.एल.सी. मा २२ ओटा भाषामध्ये ‘भाषा समूह’ मा परेका कुनै एक भाषा पढ्न पाउँछन् । तर ती सबै भाषाहरुलाई ग्रीक, ल्याटिन, हिब्रु, अरवी, रसियन, चिनिया, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिस, फारसीसँग मिसाइदिएको छ । सत्ताइस लाख नेपालीले बोल्ने मैथिली भाषालाई स्पेनिससंग मिसाइदिएकोछ ।
चार हजार पाँच सय माध्यमिक स्कूलहरु मध्ये ६–७ ओटा स्कूलहरुमा मात्रै मैथिली भाषा पढाइन्छ । त्यस्तै नेपालभाषा (नेवारी ) ५–६ ओटा स्कूलमा ऐच्छिक विषयको रुपमा पढाइन्छ । तर नेपाली र अग्रेंजी दुबै भाषा कक्षा १ देखि बी.ए. सम्म १५ बर्ष अनिवार्य छ । ६ देखि ८ सेमेस्टरसम्म पढ्यो भने संसारका कुनै पनि भाषामा दक्ष बन्न सकिन्छ । लेख्न, पढ्न, बोल्न र बुझ्नको लागि आठ सेमेस्टरसम्ममा निपुण बनाउन सकिन्छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको भृकुटी मण्डपस्थित त्रि.वि.वि.कै विश्वभाषा क्याम्पस छ । तर नेपालमा १५ बर्ष सम्मको लागि नेपाली र अग्रेंजी भाषाहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसमा भएको आर्थिक लगानी र समयको लगानी कति उत्पादक भइरहेकोछ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
अनगिन्ति विद्यार्थीहरु अग्रेंजी र नेपालीमा फेल हुन्छन् । पास हुनेहरुको भाषा हेर्ने हो भने पनि एस.एल.सी. पास गर्दासम्म उनीहरुको न नेपाली भाषामा दखल हुन्छ, न अग्रेंजी भाषामा दक्षता हुन्छ । त्यसैले धेरै बर्ष भाषा पढाइयो भने धेरै सिकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ अन्धविश्वास मात्र सावित भइरहेकोछ । जति धेरै लामो पढ्यो त्यति राम्ररी भाषा सिकिन्छ भन्ने धारणा अन्धविश्वास मात्र हो ।
भाषा पनि एउटा सीप नै हो । कुनै पनि सीप सिक्न धेरै बर्ष आवश्यक छैन । यदि उपयुक्त तरिकाले भाषा पढाउने हो भने २–३ बर्षमा बुझ्न, बोल्न,पढ्न, लेख्न जान्ने बनाउन सकिन्छ । ७ बर्षसम्म साइकल सिक्नु र ७ घण्टा सिक्नु बराबर नै हो । जुन पाठहरु सिक्नुपर्ने हो एकपटक सिकेपछि पुग्छ र त्यसपछि प्रोत्साहन (reenforcement) र सुधार तथा शुद्धि (mediation) मात्र आवश्यक छ भन्ने कुरा विख्यात Psycholinguist, Robert M Gange को निक्र्यौल छ । ( हेर्नुस– The Conditions of Learning M NewYork M Holt, Riehart &Winston, 1965)
त्यसपछि अभ्यास मात्र जरुरत हुन्छ । तर भाषा सिकाउने हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा त्यो सोचाइ छैन, चाहे त्यो नेपाली होस् वा अग्रेंजी होस् । नेपालीलाई राष्ट्रभाषा
भनेर १५ बर्षसम्म अनिवार्य गरिएकोछ । अग्रेंजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेर १५ वर्षसम्म अनिवार्य गरियो । यसरी हाम्रो राष्ट्रको ठूलो लगानी कता गइरहेकोछ कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
पाठ्यक्रम र पूर्वाग्रह
पाठ्यक्रम भनेको पनि राज्यसत्ता र शक्ति संरचनासंग सम्बन्धित प्रश्न हो । राज्यले आफ्ना निर्णयहरु लाद्न खोज्छ । सत्ता–शक्तिमा रहेका सीमित व्यक्तिहरुले ‘पाठ्यक्रम’ बनाउने क्रममा विद्यार्थीहरुलाई यही पढ्नुपर्छ, यसरी नै पढाउनुपर्छ, यही किताव पढ्नुपर्छ, यही भाषा पढ्नुपर्छ भन्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिइराखेका हुन्छन् । त्यसकारण सत्ता–शक्तिमा रहेकाहरुले अरुमाथि प्रभाव,प्रभुत्व र आधिपत्य जमाइराखेकाछन् । आफ्नो ‘संस्कृति’ र आफ्नो ‘मूल्य–मान्यता’ वा ‘रुचि’ लाद्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
विद्यार्थीहरुलाई दिने कुरा भनेको सीपहरु हुन्, भाषिक सीपहरु हुन् । अङ्ग्रेजी र नेपाली प्रयोग गर्ने र लेख्ने क्षमता दिने हो । यदि त्यो क्षमता ६–८ सेमेस्टरमा दिन सकिन्छ भने १५ बर्ष सम्म किन लम्ब्याइ राखियो ? यो लम्ब्याउनुमा सत्ता–शक्तिमा रहेकाहरुको के र कस्तो स्वार्थ छ – त्यो बुझ्न सकिएको छैन । आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहमा कुनै एक समूहलाई राम्रो लागेका अङ्ग्रेजी तथा अमेरिकी कविता अनिवार्य पढ्नुपर्छ । यो समय र लगानी अन्तर्वस्तु सिकाउनमा लगाउन सकिन्छ । तर त्यो लगानी माध्यम सिकाउनमा मात्र सीमित भइरहेकोछ ।
पैंतीस प्रतिशत समय भाषा शिक्षणमा गयो भने त्यो त बर्बादी भयो नि । त्यही समयभित्र गणित, विज्ञान, मानवअधिकार, नागरिक शिक्षा वा अन्य विषयवस्तु (content-skills) सिकाउन सकिन्छ । तर त्यति धेरै समय त ‘समास’ कति प्रकारको छ भनेर सिक्नमै गयो । नदी शब्दको २४ ओटा रुप या भू धातुको १२० रुप कण्ठ गर्नुमै बर्बाद भयो । तर कुनै पनि नेपाली केटाकेटीले संस्कृतमा नेपाली शब्दको २४ ओटा रुप कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ ? नद्याम भन्ने संस्कृत शब्द कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ ? नद्यः भनेर कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ ? पुस्तक भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ तर पुस्तकाणम् भन्ने कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ ? त्यो पढ्नका लागि सबै विद्यार्थीहरुले किन तीन–तीन वर्षको समय खर्च गर्ने ?
त्यसकारण भाषा–शिक्षणमा लागेको समय र पैसालाई कसरी जोगाउने ? कुन चरणमा भाषा सिकाउँदा बढी फाइदा हुन्छ ? एस.एल.सी. स्तरका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ९ र १० मा मात्रै अङ्ग्रेजी सिकाउँदा सायद पर्याप्त हुन्छ कि ? बच्चैदेखि दिइएको अङ्ग्रेजी त केही काम नै लाग्दैन किनभने अधिकांश प्राथमिक पाठ्शालामा तालिम प्राप्त शिक्षक छैनन, न शिक्षकले अङ्ग्रेजीमा पढाउन सक्छन्, न विद्यार्थीले अङ्ग्रेजीमा राम्ररी पढ्न र लेख्न सक्छन् । नेपाली र संस्कृत भाषा–शिक्षण र सिकाइको पनि त्यही हालत छ ।
अङ्ग्रेजी, नेपाली र संस्कृतका गुरुहरुले नोकरी त पाए । ५/६ हजार स्कूलमा थुप्रैले जागिर त पाए । तर त्यो विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रकै लागि उत्पादनमूलक भएन । विद्यार्थीहरुमाथिको बोझ र राष्ट्रिय लगानीको बर्बादीको हिसाब अब कसले गर्ने ?
बच्चाहरुको दिमाग ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरुको एउटा स्कूलले भन्छ – १२ बर्षसम्मको कुनै केटा वा केटीले ५ ओटासम्म भाषामा पूर्ण रुपले निपुणता प्राप्त गर्न सक्छ । व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुपले सिकाइयो भने विद्यार्थीहरुले ती सबै भाषा समान ढङ्गले सिक्न सक्छन् । केटाकेटीहरुलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ । किनभने मातृभाषा शिक्षा नै सबै सिकाइको आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरा यूनेस्कोले वकालत गर्दै आएको धेरै भयो । त्यसो गर्दा घर र स्कूल अथवा समुदाय अनि स्कूलबीचमा कुनै मनोवैज्ञानिक खाडल रहदैंन । बच्चाले एकदमै सजिलोसंग साक्षरता प्राप्त गर्न सक्छ । एउटा भाषामा साक्षर भएपछि अर्काे भाषामा साक्षर हुन गाह्रो पर्दैन ।
यूनेस्कोले १९५१ मा मनोवैज्ञानिकहरु, योजनाकारहरु, नीति–निर्माताहरु, शिक्षाविदहरु सबैलाई भेला गरेर पेरिसमा एउटा ठूलो सम्मेलन गरेकोथियो । सम्मेलनपछि सन १९५३ मा ‘दि यूज अफ भर्नाकुलार इन एजुकेसन’ भन्ने रिपोर्ट युनेस्कोले प्रकाशित गरेकोथियो । त्यसमा केटाकेटीहरुलाई आफ्नो भाषामा शिक्षा दिनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो भनिएको छ । कथङ्कदाचित बच्चाको भाषा त्यो देशको प्रशासनको भाषा होइन वा विश्वभाषा होइन भने त्यो बच्चालाई आफ्नो मातृभाषाका अलावा अतिरिक्त भाषाहरु पनि पढाउनुपर्छ । बच्चाको मातृभाषा त्यो देशको प्रशासन, सन्चार र अदालतको भाषा होइन वा विश्वभाषा पनि होइन भने त्यो बच्चाले सरकारी र विश्वभाषा पनि सिक्नैपर्छ, होइन भने उ अपाङ्ग हुन्छ भन्ने त्यो रिपोर्टको निक्र्यौल छ ।
नेपालमा भाषिक विविधता
हाम्रो देशको विशेषता भनेको भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता मात्र होइन भाषिक विविधता पनि हो । सन २००१ को जनगणनाले जम्मा १०० जाति–जनजातिले बोल्ने ९२ भाषाको भिन्नै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो । तर ११ ओटाजति भाषाबाहेक अरु भाषाहरु एक प्रतिशत भन्दा कम ब्यक्तिहरुले बोल्छन् । दश हजारभन्दा कम ब्यक्तिहरुले बोल्ने भाषा नेपालमा ५८ ओटा छन् । नेपालमा एक प्रतिशतले भन्दा बढी बोल्ने ११ भाषाहरुमा ५ भारोपेली र ६ भोट–बर्मेली छन् । त्यसैले विभिन्न भाषाहरुमा शैक्षिक सामग्री तयार गर्ने, पाठ्यपुस्तकहरु तयार गर्ने एउटा ठूलो चुनौती छ ।
यदि कुनै भाषामा न्यूनतम पाठ्यपुस्तकहरु र अरु पढ्ने सामग्रीहरु दिन नसक्ने हो भने त्यो भाषा जानेर थानकोटपारि खासै काम लाग्दैन । आखिर बच्चाले ५–६ कक्षामा गएर अरु भाषाहरुमा रुपान्तरण हुनैपर्छ । युनेस्कोले पनि त्यो रिपोर्टमा भनेकोथियो – विद्यार्थीहरुको शिक्षा चाहिं मातृभाषामा नै हुनुपर्छ तर अरु भाषाहरु पनि पढ्नैपर्छ । पछि गएर समाजमा र विश्व–सम’दायमा आफ्नो भूमिका खेल्ने हो भने उसले अरु भाषाहरु जान्नैपर्छ, जानेन भने उसको जीवन झ्यालढोका नभएको कोठाजस्तै अँध्यारो हुन्छ ।
मैले थाहा पाएअनुसार हामीकहाँ तिब्बती भाषा पढाउने १० ओटाजति स्कूल छन् । उर्दू भाषा पढाउने ५० ओटाजति मदरसा छन । नेपाल भाषा पढाउने एउटा मात्रै स्कूल छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा आ–आफ्नै मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेर लेखिएकोछ । तर सरकारद्धारा दिइनेछ भनेर लेखिएकोछैन । समुदायले चाहेमा यस्ता स्कूल खोल्न सक्नेछ भनिएकोछ । तर त्यसमा राज्यको के जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा परिभाषित गरिएकोछैन । प्राथमिक तहपछि मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको बारेमा संविधान मौन छ ।
अहिलेको प्राथमिक पाठ्यक्रममा ऐच्छिक बिषयको समूहमा मातृभाषा लिन सकिन्छ । जस्तै डोल्पा वा मुस्ताङका कुनै स्कूलले ऐच्छिक बिषयको रुपमा तिब्बती प्रयोग गर्न चाहयो भने गर्न सक्छ । तर त्यसको लागि शिक्षकको तलबदेखि अरु सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्कूलले नै लिनुपर्छ ।
नेपालमा ४८.६१ प्रतिशतले बोल्ने भाषालाई राज्यले राष्ट्रभाषाको रुपमा र शिक्षाको माध्यम भाषाको रुपमा प्रयोग गरिरहेकोछ । धेरै जस्तो लगानी त्यसमै भइरहेकोछ । बाँकी ५१.४९ प्रतिशतले बोल्ने भाषाप्रति राज्यको दायित्व के त ? शिक्षामा पहुँच सबैको समान छैन, फरकफरक छन् । साक्षरताकोे हिसाबले हेरियो भने झण्डै १३ लाख जनसंख्या भएको तामाङ समुदायमा सात सय स्नातकहरु मात्रै छन् ।
एकातिर २० प्रतिशतभन्दा तल साक्षरता भएका २०–२२ ओटा समुदाय नेपालमा छन् भने अर्काेतर्फ राष्ट्रिय साक्षरताको प्रतिशत अहिले ५९.६ प्रतिशततिर पुगिसकेकोछ । मारवाडी ९२ प्रतिशत, बाहुन ८० प्रतिशत, क्षेत्री ६६ प्रतिशत, नेवारहरु ७६ प्रतिशतभन्दा बढ्ता साक्षरहरु छन । तर २० प्रतिशतभन्दा तल साक्षर भएका दलित समुदायलाई र जनजातिहरुलाई उनीहरुकै मातृभाषामा शिक्षा दियो भने उनीहरुको साक्षरता दर एकदमै छिटो अगाडि बढ्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा थारु र मुस्लिमहरु निकै पछाडि परेकाछन् । यिनीहरुमा निरक्षरता प्रतिशत नै बढी छ । त्यस्ता समुदायहरुलाई मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ र अतिरिक्त भाषा शिक्षा पनि दिनुपर्छ । यिनीहरुको लागि सरकारले मातृभाषामै प्राथमिक शिक्षाको ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ( हेर्नुस – Brian V= Street Literacy and Development MEthnographic Perspectives. LondonM Routledge& Kegan Paul,2000)
थारु, चेपाङ, मगर, तामाङ र मुस्लिम जस्ता न्यून साक्षर समुदायहरुलाई माथि उठाउने हो भने मातृभाषामै शिक्षण सामग्रीहरु तयार गर्नुपर्छ । प्रजनन, परिवार नियोजन, बालस्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुको प्रचार–प्रसारको सामग्री उनीहरुको मातृभाषामा हुनुपर्छ । जो माथि उठिसकेका छन् राज्यले तिनीहरुको खासै ख्याल गर्नुपर्दैन । तर समाजमा जो सबभन्दा तल परेकोछ,उनीहरुलाई माथि उठाउदै लैजानुपर्छ । त्यसको लागि उनीहरुको भाषामा सामग्रीहरु उत्पादन गर्नुपर्छ ।
जीवनजल कसरी तयार गर्ने ? सर्वाेत्तम पीठो कसरी तयार गर्ने ? कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने भन्ने कुरा नेपाली भाषामा मात्र बनाएर पुग्दैन । ती सामग्रीहरु अरु भाषामा पनि बनाइदिनुपर्यो, ताकि त्यसको सन्देश तुरुन्तै प्रभावकारी होस्, सजिलै सम्प्रेषण होस् । शिक्षा, सन्चार, न्यायालय, सरकारी कामकाज र प्रचार–प्रसारमा समेत देशका विभिन्न भाषाहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी छ ।
राजनैतिक पार्टीहरुको चुनावको घोषणापत्र हेर्ने हो भने सबैले प्रजातन्त्र र समानताको कुरा गरेका छन् । एकपछि अर्काे पार्टी र सरकारहरुले ‘बिपीको सपना’ ‘मनमोहनको सपना’ मदन भण्डारीको ‘बह’दलीय जनवाद’ साकार पार्ने र सामाजिक न्याय दिलाउने कुरा गरेका छन् । तर जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ त्यतिखेर फरक परेकोछ । त्यसैले राजनैतिक पार्टीहरुको प्रतिबद्धता भनेको पनि हात्तीको देखाउने दाँत हुँदै आएको छ । जब पार्टीहरु सरकारमा पुग्छन् र उनीहरुले केही गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन्, त्यसबाट उनीहरुको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता खोक्रो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
राज्य–सन्चालनका निर्देशक सिद्धान्तहरुमा स्पष्टरुपले सामाजिक न्याय र समानताको मीठो कुरा छ । नेपाललाई ‘बहुभाषिक मुलुक’ भनेर घोषित गरेकोछ । काठमाण्डौ र धनुषाका स्थानीय निकायहरुमा अधिकाँश मान्छेहरुले बोल्ने भाषा ‘पनि’ प्रयोग गर्न दिने भन्ने कुरा आएको थियो । नेपाली भाषा त प्रयोग भइरहेकै छ । यो प्रयोग गरिनेछैन भनेकै छैन । अरु भाषाहरु पनि ‘बैकल्पिक भाषा’ को रुपमा प्रयोग गर्दाखेरि कसैको अधिकार हनन हुने स्थिति नै आउँदैन ।
नेपालीभाषीहरुमाथि कुनै स्थानीय भाषा लाद्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन । जसले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्छ,उसले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै उठेको हो । यति सामान्य कुरा पनि नेपालमा सह्य छैन भने समानता र सामाजिक न्याय मात्र खोक्रो आश्वासन हो । धनुषामा कसैले मैथिली भाषामा एउटा दरखास्त दियो भने त्यसले काठमाण्डौ बस्ने कुनै भाषा बोल्ने ब्यक्तिको अधिकार हनन गरेको ठहर्छ ? त्यसैले उसले मैथिली भाषा प्रयोग गर्यो भनेर अरु भाषा–भाषीले अदालत गएर किन आपत्ति जनाउने ?
त्यसैले संविधान जुन बाटोतिर जान खोजेको थियो, त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले छेक्न खोजेकोछ । संविधानमा प्रत्याभूत भएका जुन ‘सिद्धान्तहरु’ छन्,त्यसलाई मास्न खोजेकोछ । यो एक किसिमको दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । भोलि यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।
एकातिर सर्वाेच्च अदालतले श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक सेवामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा भर्ना हुन चाहने अधिकृतहरुको पाठ्यक्रमबाट ‘नेपाली बिषय’ हटाउनासाथ सम्बन्धित मन्त्रालयसंग रायसल्लाह नलिएको भन्ने आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६ (१) को ब्यवस्थामा ‘आघात पुर्याउँछ’ भनेर १५ बर्षसम्म नेपाली पढेका स्नातकहरुलाई ‘नेपाली बिषय’ अनिवार्य गर्नैपर्ने निर्णय गर्यो भने अर्काेतर्फ स्थानीय निकायहरुमा मैथिली र नेपाल भाषालाई प्रयोग गर्न निषेधाज्ञा जारी गर्यो ।
सरकारी कामकाजमा नेपालमा जीवित भाषाको रुपमा लाखौले बोल्ने भाषाहरु प्रयोग गर्न पाईदैन भनेर ब्याख्या गर्यो । संविधानका ‘धाराहरु’ को अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने सायद सर्वाेच्चको निर्णय सही होला । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गरेर संविधानमा रहेका राज्यसन्चालनका निर्देशक ‘सिद्धान्त’हरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने अदालतको निषेधाज्ञाले ती सिद्धान्तलाई लत्याएको छैन र ?
विभिन्न भाषाभाषीहरुले नेपाली भाषा बोल्नेहरुसंग सामाजिक, आर्थिक , राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धामा जाने हो भने नेपाली भाषा बोल्न र लेख्नै पर्ने बाध्यता छ । जस्तै राजनीति नै गर्ने हो भने नेपाली भाषामा राम्रोसंग बोल्न र भाषण गर्न नसक्नेले नेतृत्व तहमा पुग्न नसोंचे हुन्छ । त्यसैले स्रोत, साधन र सत्ताशक्तिसम्म पहुँचको लागि नेपाली एक अचूक हतियार भएको छ ।
तर संविधानमा नेपालमा विभिन्न समुदायले बोल्ने भाषा ‘राष्ट्रिय भाषा’ हुनेछ भनेर मानिएको छ । ती राष्ट्रिय भाषाहरु कहाँ प्रयोग गर्ने त ? सरकारी सन्चार माध्यमहरुमा प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? शिक्षामा कुन तहसम्म प्रयोग गर्ने ? सबै जन–जातिहरुले तिरेको राजस्वबाट सन्चालित प्रज्ञा–प्रतिष्ठान,साझा प्रकाशन, रेडियो नेपाल, नेपाल टिभी ती भाषाहरु प्रयोग गर्दछ कि गर्दैन ?
सबै जातिका भाषाभाषी बोल्ने नेपालीहरुबाट कर उठाएर राज्यले एउटा मात्र भाषामा लगानी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? नेपाली भाषा जान्यो भने मात्र जागीर पाउने ,अरु भाषा जान्नेले जागीर नपाउने भन्ने किसिमको स्थिति नेपालमा अहिले छ । यसले निश्चित रुपले सामाजिक असमानता, तनाव, असन्तोषहरु ल्याउँछ । पछि गएर त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्नै सकिदैंन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि रेडीयो नेपालले नेपालीबाहेकका अन्य दश ओटा भाषामा जम्मा ५÷५ मिनेटको समाचार दिन थालियो । २००७ सालदेखि २०२१ सालसम्म नेपालभाषा र हिन्दीमा पनि समाचार दिइन्थ्यो । २०२२ साल बैशाख १ गतेदेखि स्थगित गरिएको त्यो क्रमलाई २०४६ सालपछि फेरि निरन्तरता दिइयो । त्यसमा मैथिली, उर्दु,तामाङ र संस्कृत भाषा पनि थपियो । २०४६ पछिको अर्काे परिवर्तन भनेको नेपाल टी.भी.ले मैथिलीमा १–२ ओटा र नेपालभाषामा अहिलेसम्म ३–४ ओटा टेलिफिल्मका सिरियलहरु प्रसारण गरेका हुन् ।
कहिलेकाहीं केही सरकारी प्रचार सामग्रीहरु अरु भाषामा पनि प्रकाशन भएका छन् । जस्तै स्वर्गवासी राजा र रानीको जीवनी तिब्बती र उर्दू भाषामा पनि प्रकाशित भएकोथियो । भाषामा केही खुकुलोपन आएको छ कि भन्ने कुराको यो एउटा सङ्केत चाहिं हो । तर नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको अत्यधिक प्रचार–प्रसारको लागि राज्यबाट जुन लगानी भइरहेकोछ त्यसको तुलनामा अरु भाषाहरुको उत्थान, संरक्षण र समबद्र्धनको लागि केही पनि लगानी भएको छैन ।
स्थानीय निकायहरुले पनि केही गरेका छैनन । पी. एल. सिंह मेयर भएपछि काठमाण्डौ र ललितपुर नगरपालिकाको साइनबोर्डमा रन्जनालिपि प्रयोग गरी क्रमशः केही स्थानको सडकपाटीमा प्राचीन नाम प्रयोगमा ल्याएका थिए । यसलाई ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन ठान्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, तर अरु भाषाप्रतिको राज्यको हेराइमा केही पनि फरक आएको छैन ।
यस कदमको प्रकाश ए. राजले विरोध जनाएकोमा म उहाँलाई बौद्धिक उदारताको लागि बधाई दिन चाहन्छु, कमसेकम दाहाल यज्ञनिधि र अच्युतरमण अधिकारी झैं सर्वाेच्च अदालतमा पुग्नुभएनछ । चन्द्रशमशेरले सन १९१२ मा खडा गरेको ‘गोर्खा–भाषा प्रकाशिनी समिति’ को उद्देश्य ‘मकैको खेती’ जस्ता किताब फेरि निकाल्नेलाई हतोत्साहित गर्नुथियो, सबै प्रकाशनमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम गर्नुथियो ।
अहिलेपनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा भाषाको मामिलामा चन्द्रशमशेरको सोचले नै निरन्तरता पाइरहेको छ । देश र समाज फेरिदै गएर सन २००४ सम्म पुग्दा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । तर राज्य चाहिं अहिले पनि सन १९१२ को चन्द्रशमशेरको सोच अनुरुप चल्न खोजिरहेको छ ।
भाषामा प्रजातान्त्रीकरणको कुरा राज्यले मात्रै गर्नै कुरा होइन । त्यस्तो भाषा बोल्ने समुदायको पनि जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ । नीति–निर्माण र स्रोत–परिचालन गर्ने संस्थाको हिसाबले राज्यको जिम्मेवारी त अवश्य नै छ । तर विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायहरुको पनि केही जिम्मेवारी छन । त्यस्ता विभिन्न समुदायहरुले आफ्नो भाषालाई प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने खालका गतिविधिहरु सन्चालन गर्ने, विद्यालयहरु खोल्ने कामहरु गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा थुप्रै विद्यालय÷कलेजहरु समुदायकै पहलमा खुलेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६१ ओटा आङ्गिक क्याम्पसहरुमध्ये ६ ओटा मात्रै श्री ५ को सरकारले स्थापित गरेकाथिए । अरु सबै समुदायले नै खोलेका क्याम्पसहरु हुन् । अस्कल, महेन्द्र मोरङ, पृथ्वीनारायण क्याम्पस आदि सबै स्थानीय समुदायले खोलेका हुन् । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८–२०३२ पछि समुदायले स्थापना गरेका सबै क्याम्पसहरु सरकारले त्रि.वि.वि.मा गाभेको हो ।
त्यसैले फेरि पनि विविध भाषा–भाषी समुदायका नेताहरु अगाडि आउनु पर्यो । आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातिको अस्तित्वरक्षा र विकास गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्यो । सबै कुरा सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ । समुदाय आफैलाई आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति मायामोह छैन भने सरकारले हेरेन भन्ने अधिकार पनि त्यो समुदायलाई रहन्न । त्यसैले समुदाय आफैले प्राथमिक स्कूलहरु खोल्नुपर्यो अनि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्दछ ।
तिब्बतीहरु नेपालमा १९,२६१ मात्र छन् । तर उनीहरुले आफ्नो स्कूल खोल्नेदेखि लिएर गुम्बा बनाउने , आफ्नो भाषामा पत्रपत्रिका चलाउन, क्यालेण्डर निकाल्न, पुस्तक पसल खोल्न करौडौ लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्तै मारवाडीहरुले आफ्नो समुदायको विकासको लागि जति लगानी गर्छन त्यति अरु जाति वा समुदायहरुले कमै गर्छन् । मारवाडीहरु जस्तै अरु जातिका मानिसहरु धनी नभएका होइनन ।
थकालीहरु, नेवारहरु, गुरुङहरु, राई, लिम्बुहरुमा प्रशस्त धनीहरु पनि छन् । तर उनीहरुले आफ्नो जाति र भाषाको विकासको लागि कति खर्च गरेका छन् त ? कतिओटा स्कूल खोलेका छन् ? कतिओटा पुस्तकालयहरु खोलेका छन् ? कतिओटा पुस्तक–पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन गरेका छन् ? जसरी इस्लाम धर्मावलम्बीहरु, तिब्बतीहरु र मारवाडीहरुले सामाजिक कामहरु गरेका छन्, त्यति अन्य समुदायबाट भएको पाइदैन । २०४६ सालपहिले पनि आफ्नो भाषा–संस्कृतिको प्रचार गर्नको लागि मुसलमानहरुले अधिराज्यभरि ‘मदरसाहरु’ चलाएका थिए तर अरु समुदायले किन त्यसो गर्न सकेनन त ?
आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको माया छ भने ती समुदायका धनीमानीहरुले लगानी गर्नुपर्यो । एउटा विवाहमा १५औं लाख रुपिया खर्च गर्ने मान्छेले एउटा स्कूल खोल्नको लागि १५ हजार रुपिया चन्दा दियो भने ठूलो कुरा ह’न्छ । तर त्यसो गरिरहेका छैनन, किन ? सरकारले केहि गरेन भनेर मात्र पुग्दैन, समुदाय आफैले पनि के–के गर्न सकिन्छ, ती कामहरु गर्नेतिर लागियो भने सरकारलाई पनि उचित दबाब दिन सकिन्छ ।
एकातिर लिपि भएका, ब्याकरण भएका, साहित्यसम्पन्न, सयौं÷हजारौं पुस्तकहरु प्रकाशित भएका भाषाहरु नेपालमा छन भने अर्काेतिर एक हजार भन्दा कम ब्यक्तिहरुले बोल्ने र लिपि नै नभएका भाषाहरु पनि थुप्रै छन् । ब्याकरण, शब्दकोश, लिपि बनाउनुपर्ने भाषाहरु पनि थुप्रै छन् । त्यसैले सबैको लागि एउटै प्याकेजको समाधान नेपालमा छैन । यस समस्यालाई समाधान गर्न सापेक्षरुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबभन्दा तल परेका समुदायहरुलाई माथि उठाउनेतिर प्राथमिकता दिनुपर्दछ । उनीहरुलाई एकातिर छाडेर भाषा, संस्कृति र धर्मको नाममा सम्पन्न भाषा समुदायहरुमा मात्र लगानी गरियो भने फेरि पनि असमानता हुन्छ । राज्यको लगानीको दुरुपयोग हुन्छ । त्यसैले हामीले विभिन्न भाषाको स्थिति हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
जस्तै तराईका थारुहरु तथा पहाडका तामाङहरु आर्थिक, सामाजिक र शेक्षिक हिसाबले पछि परेका छन् । पहिले उनीहरुलाई हेर्नुपर्यो, तब मात्रै सामाजिक न्यायको बाटोतिर गइन्छ । समानता भनेर सबै भाषालाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्ने कुरा आउँदैन । काठमाण्डौ उपत्यकामा निरपेक्ष गरिबहरु ४ प्रतिशत मात्र छन् जबकि राष्ट्रिय औसत ३८ प्रतिशत छ । तर पहाडी क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा तल ५६ प्रतिशत जनसंख्या छ ।
यस आधारमा हेर्दा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक मुद्दाहरु समुदाय र ठाउँ हेरी फरकफरक छन् । ती सामाजिक समस्याहरुलाई हामीले नकारेकाले मानिसहरुले बन्दुक बोकेका छन् । भोटले समाधान भएन भने मान्छेले बन्दुक उठाउँछ । त्यो प्राकृतिक कुरा हो । हामी यति समयभित्र समस्याको समाधान गर्छौ भनेर सरकार र पार्टीहरुले गरेर देखाउनुपर्यो चाहे त्यो गरिबी र असमानताको कुरामा होस् या भाषिक वा सांस्कृतिक असमानताको समस्यामा होस् ।
संसदीय ब्यवस्था सर्वाेत्तम व्यवस्था हो । यसको विकल्प छैन । तर वर्तमान आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक–भाषिक–सांस्कृतिक समस्याहरु राज्यले समाधान गर्न सक्नुपर्यो । समस्याहरु समाधान पनि भएनन र गरिबी, असमानता, बिषमता झन–झन बढ्दै गए भने मान्छेहरुले निश्चित रुपले यसको समाधान खोज्छन् । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसरी समाधानका विकल्पहरु खोज्दाखेरि के हुन्छ, भन्न सकिन्न ।
हामीले खिचातानी र अनावश्यक विवादमा धेरै समय र स्रोतहरु बर्बाद गरिसकेका छौ । नेपालको लागि अब धेरै समय छैन । एकातिर भारत छ, जसको बार्षिक आर्थिक बृद्धिदर ७–८ प्रतिशत छ । अर्काेतिर चीन छ, जसको बार्षिक आर्थिक बृद्धिदर ११–१२ प्रतिशत छ । नेपालमा जनसंख्या बृद्धिदरचाहिं २.२५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरचाहिं ३.७५ प्रतिशत छ ।
दुईओटा विकसित र विशाल गणतन्त्र देशहरुको बीचमा च्यापिएको एक निरीह हिन्दु अधिराज्य कति दिनसम्म टिक्ने यसरी मात्र ? त्यसैले हामीले चाँडै सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेनौ भने अबका दिनमा धेरै गाह्रो हुनेछ । दिनानुदिन बेरोजगारी बढिरहेकोछ । ३८ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । ४९ प्रतिशत आंशिक बेरोजगार र १४ प्रतिशत श्रमशक्ति पूर्ण बेरोजगार रहेको देशमा सिंहदरबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधित्व भएका संसदवादी पार्टीहरु कुस्ती खेल्दै रहने अनि त्यस इतर राजनीतिक शक्तिहरु बन्दुक बोक्ने हो भने त जनताले अवश्य पनि समस्या समाधानका उपायहरु खोज्नेछन् । त्यसैले सामाजिक, राजनैतिक , भाषिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विभेदका समस्याहरु र तिनका शीघ्र समाधानतिर हामी सबैले ध्यान, समय र बुद्धि लगानी गर्नुपर्यो ।
( देशका विख्यात बिद्धान प्रा.कमलप्रकाश मल्लको १७ नोभेम्बरका दिन देहावसान भो । उनको यो आलेख नेपाली त्रैमासिक अङ्क १८१ मा प्रकाशित र १ असोज २०६१ सालमा मदन पुरस्कारमा दिईएको बिद्धत प्रवचनको संक्षिप्त रुप हो ।)[irp posts=”72145″ name=”देशको दिमाग डुब्यो”]
Tags: Dr. Kamal Prakash Mallaissue-3अंक-३डा. कमल प्रकाश मल्ल
डायवेटिज विशेषज्ञ डा. ज्योति भट्टराईसंग live संवाद